ပူပြင်းသော ရာသီဥတုတွင် စားသင့်သော အစားအစာများ…! – May NewsHUB
ပူပြင်းသော ရာသီဥတုတွင် စားသင့်သော အစားအစာများ…!
လူသားတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်တွင်းအလေးချိန်ဟာ ပျမ်းမျှ ၉၈ ဒဿမ ၆ ဒီဂရီဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုပေါ် မူတည်၍ ၎င်းပမာဏထက် အပူချိန် အတက်၊အကျ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်အတွင်းအပူများတာကို ဆေးပညာလောကမှာ “Heat Stress” လို့ခေါ်ကြပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအပူချိန်က သူ့အလိုလို အေးသွားတာမျိုး မရှိတတ်ပါဘူး။
လိုအပ်တာထက် အပူချိန်များနေတဲ့အခါ ပိန်ချုံးလာခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ လျှာ- နှုတ်ခမ်းတွေသာမက အရည်ပြားပေါ်မှာ အဖုအပိမ့်တွေ ထွက်လာခြင်း၊ ဝက်ခြံထွက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးဝေခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်းတို့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ကလီစာတွေကိုပါ ပျက်စီးစေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာချက်အရ သိရပါတယ်။
မိုးရာသီမှလွဲ၍ ချမ်းအေးတဲ့ ဆောင်းရာသီနဲ့ နွေပူပူတို့မှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူဓာတ်များသူတွေအနေဖြင့် ယခင်ကထက် ရေပိုသောက်ရင်း၊ နေ့စဉ်စားသမျှ အစားအစာတွေထဲမှာ ရေဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အအေးစာလေးတွေကို ဖြည့်စွက်စာအဖြစ် စားသုံးသင့်ပါတယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံကို အရည်ဓာတ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဖရဲသီးထဲမှာ ရေဓာတ် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပါဝင်တာကြောင့် အပူငြိမ်းအေးစေတဲ့ အကောင်းဆုံး သီးနှံဖြစ်ပါတယ်။
သခွားသီးလေးတွေမှာ ရေဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါရှိလို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိထိရောက်ရောက်အေးမြစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တန်ဖိုးနည်း သခွားသီးလေးတွေကို နေ့စဉ်စားပေးသင့်ပါတယ်။
ပူစီနံရွက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကို အေးမြစေတာကြောင့် မြန်မာ၊အိန္ဒိယ၊ဗီယက်နမ်၊မကာအိုစတဲ့ အာရှတိုက်တခွင်ရှိ ရှေးတိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးများက ပူစီနံပင်များကို အပူငြိမ်းဆေးအဖြစ် ဆေးဝါးဖော်စပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
စမုံစပါးအစေ့လေးတွေကို သောက်ရေခွက်ထဲ တစ်ညအိပ်စိမ်ထားပြီး နံနက် အိပ်ယာထတဲ့အခါ ရေသောက်ရင်း အဖတ်တွေပါ ကုန်အောင် ဝါးစားပေးပါ။ တစ်နေ့တာလုံး အပူငြိမ်းအေးစေနိုင်တဲ့အပြင် ခံတွင်းရနံ့ကိုပါ ရှင်းသန့်စေပါတယ်။
အုန်းသီးစိမ်းနုနုမှရတဲ့ အုန်းစိမ်းရည်ဟာလည်း ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူငြိမ်းစေတဲ့ ဆေးကောင်းတစ်လက်ဖြစ်တာမို့ ကိုယ်တွင်းအပူဓာတ်များသူတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများ မှီဝဲသင့်ပါတယ်။ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း မှလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ပူပွငျးသော ရာသီဥတုတှငျ စားသငျ့သော အစားအစာမြား
လူသားတဈယောကျအတှကျ ကိုယျတှငျးအလေးခြိနျဟာ ပမျြးမြှ ၉၈ ဒဿမ ၆ ဒီဂရီဖွဈပွီး ရာသီဥတုပျေါ မူတညျ၍ ၎င်းငျးပမာဏထကျ အပူခြိနျ အတကျ၊အကြ အနညျးငယျ ပွောငျးလဲတတျပါတယျ။
ကိုယျအတှငျးအပူမြားတာကို ဆေးပညာလောကမှာ “Heat Stress” လို့ချေါကွပွီး ခန်ဓာကိုယျတှငျးအပူခြိနျက သူ့အလိုလို အေးသှားတာမြိုး မရှိတတျပါဘူး။
လိုအပျတာထကျ အပူခြိနျမြားနတေဲ့အခါ ပိနျခြုံးလာခွငျး၊ ကွှကျတကျခွငျး၊ လြှာ- နှုတျခမျးတှသောမက အရညျပွားပျေါမှာ အဖုအပိမျ့တှေ ထှကျလာခွငျး၊ ဝကျခွံထှကျခွငျး၊ ခေါငျးမူးဝခွေငျး၊ ပြို့အနျခွငျးတို့အပွငျ ခန်ဓာကိုယျတှငျး ကလီစာတှကေိုပါ ပကျြစီးစနေိုငျတယျလို့ လလေ့ာခကျြအရ သိရပါတယျ။
မိုးရာသီမှလှဲ၍ ခမျြးအေးတဲ့ ဆောငျးရာသီနဲ့ နှပေူပူတို့မှာ ခန်ဓာကိုယျတှငျး အပူဓာတျမြားသူတှအေနဖွေငျ့ ယခငျကထကျ ရပေိုသောကျရငျး၊ နစေ့ဉျစားသမြှ အစားအစာတှထေဲမှာ ရဓောတျကွှယျဝတဲ့ အအေးစာလေးတှကေို ဖွညျ့စှကျစာအဖွဈ စားသုံးသငျ့ပါတယျ။
လူ့ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံကို အရညျဓာတျနဲ့ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျထားပါတယျ။ ဖရဲသီးထဲမှာ ရဓောတျ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးကြျော ပါဝငျတာကွောငျ့ အပူငွိမျးအေးစတေဲ့ အကောငျးဆုံး သီးနှံဖွဈပါတယျ။
သခှားသီးလေးတှမှော ရဓောတျကွှယျဝစှာ ပါရှိလို့ ခန်ဓာကိုယျကို ထိထိရောကျရောကျအေးမွစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တနျဖိုးနညျး သခှားသီးလေးတှကေို နစေ့ဉျစားပေးသငျ့ပါတယျ။
ပူစီနံရှကျဟာ ခန်ဓာကိုယျတှငျးကို အေးမွစတောကွောငျ့ မွနျမာ၊အိန်ဒိယ၊ဗီယကျနမျ၊မကာအိုစတဲ့ အာရှတိုကျတခှငျရှိ ရှေးတိုငျးရငျးဆေးဆရာကွီးမြားက ပူစီနံပငျမြားကို အပူငွိမျးဆေးအဖွဈ ဆေးဝါးဖျောစပျလာခဲ့ကွပါတယျ။
နှမျးစလေ့ေးတှကေ အပူငွိမျးအေးစတေဲ့ အိမျတှငျးဆေးဝါး တဈမြိုးဖွဈတာကွောငျ့ နှမျးစားရငျး ရမြေားမြားသောကျပါ။ နှမျးပဈြ၊နှမျးယိုလေးတှကေလညျး အပူငွိမျးအေးစအေောငျ အထောကျအပံ့ ပေးပါတယျ။
စမုံစပါးအစလေ့ေးတှကေို သောကျရခှေကျထဲ တဈညအိပျစိမျထားပွီး နံနကျ အိပျယာထတဲ့အခါ ရသေောကျရငျး အဖတျတှပေါ ကုနျအောငျ ဝါးစားပေးပါ။ တဈနတေ့ာလုံး အပူငွိမျးအေးစနေိုငျတဲ့အပွငျ ခံတှငျးရနံ့ကိုပါ ရှငျးသနျ့စပေါတယျ။
အုနျးသီးစိမျးနုနုမှရတဲ့ အုနျးစိမျးရညျဟာလညျး ခန်ဓာကိုယျတှငျး အပူငွိမျးစတေဲ့ ဆေးကောငျးတဈလကျဖွဈတာမို့ ကိုယျတှငျးအပူဓာတျမြားသူတှနေဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျလောငျးမြား မှီဝဲသငျ့ပါတယျ။ ရဓောတျခမျးခွောကျခွငျး မှလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
အောင်မြင်မှုတံခါးကို ဖွင့်ဟနိုင်မယ့် သော့ချက်များ အရမ်းကောင်းလို့မျှဝေလိုက်ပါတယ်…!